The Note Galaxy sida dhaqsaha badan Video Covnerter - diinta Videos in Galaxy Note
> Resource > Samsung > Sida loo Beddelaan Video inay Galaxy Note
Samsung Galaxy Note waa isku-a smart ee casriga ah Android iyo computer kiniin. Its 5.3-inji size shaashadda (5.5-inji size screen u Fiiro Galaxy II) waa inta u dhaxaysa in ee casriga ah ee caadiga ah iyo kiniiniyada ka weyn. Sababtoo ah halka ay kaydinta weyn iyo displayer weyn, waana wax weyn noo ah si aad u daawato videos on go ah. Si kastaba ha ahaatee, u arkaysid videos ama filimada qalabka, waxa aad u badan tahay in ay soo gaarto arrimaha karin, waayo, taasu waxa kaliya taageeraa codecs video sida MPEG-4, H.263 iyo H.264.
Si aad u badan oo videos iyo filimada sida MKV, MOV, AVI, FLV, MTS, M2TS, VOB iwm ciyaaro, marka hore, waa in aad iyaga loogu badalo in ay video qaab la jaan qaada Samsung Galaxy Note (Note Galaxy sii daayay cusub ee II halkan waxaa ka mid ahaa). Si aad u samayn, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa gargaar aad u weyn. Waxay ka dhigaysa diinta video ah mid aad u fudud, sida 1-2-3. Uma baahnid in aad si uu u ogaado wixii qaabab Samsung Galaxy Note taageero, kaliya raac tilmaan-hoose si aad u sameeyso tallaabada shaqadan talaabo. Ka dib markii in, aad videos surly waxaa la ciyaari karaan taxane Note Samsung Galaxy si habsami leh.
1 Load videos in this video in Galaxy Note Converter
Marka aad u app this, in aad la keenay "Beddelaan" interface by default. Markaas, waxaad riixi kartaa ah "Add Files" button on dhinaca kore ee bidix ama in this app ee Murayaad bidix si ay u dajiyaan videos for diinta. Haddii files yihiin ee anfacaya, aad si toos ah u soo jiidi kartaa oo iyaga hoos u barnaamijkan.
2 Dooro qaab ku haboon Galaxy Note
Haddii aanad garanayn waxa format ugu fiican ee Galaxy Note, waxba ma ahan halkan, app this si toos ah siisaa ah pre-goob filaayo in qalabka. Tag liiska qaabka wax soo saarka adigoo gujinaya icon image Qaabka guriga dhankiisa midigta oo ah interface ka. Halkan, waxaad ka dhacay kartaa "Device" tab. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa noocyo badan qalabka sida "Apple", "Samsung", iyo "HTC" iwm Tag "Samsung" iyo ka dibna dooran "Galaxy Note" under this category.
3 bilow videos in Galaxy Note diinta
Beddelaan videos in Galaxy Note socon qaabab video garaacida ah "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface ka.
Bal eeg, tan Video Converter bilaabayo diinta video, la bar horumarka iyo soo bandhigay waqti ka harsan tahay. Ka dib markii diinta, kuwaas oo dhan files gediyay waxaa si toos ah badbaadiyey galka wax soo saarka ay. Waxaad riix kartaa "Open Folder" doorasho ee interface ugu weyn si aad uga hesho. Dabcan, hadii aad rabto in aad beddesho Jidka ay wax soo saarka, kaliya riix "..." button loo sameeyo.
Hadda, in aad aad Galaxy Note wareejin karaan faylasha la gediyay via cable. Noqon doonaa in aad yaabeen in la helo kuwaas oo asal-aqlka videos la aqoonsan karo iyo haatan ciyaartay si habsami leh qalabka.